छालालाई चम्किलो र नरम राख्न महको प्रयोग, यस्तो छ प्रयोगविधि | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more छालालाई चम्किलो र नरम राख्न महको प्रयोग, यस्तो छ प्रयोगविधि
छालालाई चम्किलो र नरम राख्न महको प्रयोग, यस्तो छ प्रयोगविधि
जेठ १८ गते, २०७६ - १३:०८
एजेन्सी । मह छालाको गहिरो मसाजका लागि उपयुक्त वस्तु हो। महमा भएका तत्वहरू छालामा सजिलै प्रवेश गर्छन् र यिनले छालालाई सन्तुलित र नरम राख्छन्। यसका लागि महको मास्क बनाउने, एक चम्चा मह सफा र सुक्खा छालामा लगाउने र १५ देखि २० मिनेट राखी चिसो पानीले पखाल्ने।
महले छालामा क्लिन्जरको काम गर्छ। थोरै मह छालाको प्वालमा पुग्छ र प्वालको मुखमा रहेको कालो भागलाई नरम बनाउँछ। महले छालामा कीटाणु अक्सिडेन्टविपरीत काम गर्छ। साथै यसले छालाका मसिना प्वालमा रहेका फोहोरलाई सफा गर्छ। छालाको फोहोर सफा गर्न नरिवलको तेल मिसाउने। यो लेपलाई अनुहारमा लगाएर विस्तारै मालिस गर्ने। आँखालाई जोगाएर मालिस गरेपछि चिसो पानीले पखाल्ने।
छालामा स्क्रवको रूपमा प्रयोग
– महलाई स्क्रवको रूपमा प्रयोग गरे छालामा चमक आउँछ। यसका साथै कृत्रिम स्क्रवले छालामा हुनसक्ने राता बिमिरा या एलर्जी हटाउन पनि सकिन्छ। महको स्क्रवले छालाका मृतकोषलाई हटाई नयाँ सेल निस्कन मद्दत गर्छ। यसको प्रयोगले छालामा थप चमक आउँछ।
महलाई स्क्रवको रूपमा प्रयोग गर्न दुई चम्चा महमा एक चम्चा बेकन सोडा मिसाउने। पानीले अनुहार भिजाउने विस्तारै अनुहारमा यो लेपले मालिस गर्ने। मालिस गर्दा रक्तसञ्चार हुने गरी गर्नुपर्छ। मह प्राकृतिक स्क्रवको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ नै, यसले कीटाणुविरुद्धको काम पनि गर्छ र छालालाई नरम बनाउँछ कुनै पनि दुखाइमा महको लेप लगाए दुखाइ कम हुन्छ र सुन्निएको भाग पनि छिटो निको हुन्छ।
– एक चम्चा महमा एक चम्चा नरिवल वा ओलिभको तेल मिसाउने। यसरी मिसाएको लेपलाई प्रभावित छालाको भागमा लगाउने र औंलाले दुई मिनेटसम्म विस्तारै मालिस गर्ने। त्यसपछि सफा तथा तातो लुगा अनुहारमाथि राख्ने। यसलाई केही दिन जारी राख्नुपर्छ।
घामले डढेको छालामा उपयोगी
– घामले डढेको छालामा मह एकदमै उपयोगी औषधि मानिन्छ। महले डढेको कोषमा पोषण पु¥याउने काम गर्छ र यसले पुन छालामा कोषहरू बन्न थाल्छन्। यसका लागि एलोभेराको रसमा मह मिसाएर लेप बनाउने र त्यो लेप नियमित प्रयोग गर्नाले विस्तारै डढेको छालाको कोष हट्छ र छाला सुन्दर बन्छ।
डन्डिफोर र बिमिरा हटाउन
– महको प्रयोगले अनुहारको डन्डिफोर हटाउँछ। महमा हुने कीटाणुविरुद्धको शक्तिले अनुहारको बाहिरी सतहमा मात्र फाइदा गर्दैन। यसको प्रयोगले साना प्वालबाट भित्रीतहसम्म पुगेर डन्डिफोर हटाउँछ। यसका लागि काँचो महलाई प्रभावित भागमा लगाउने र १५ देखि २० मिनेटसम्म राख्ने। त्यसपछि चिसो पानीले पखाल्ने। नियमित यो क्रम जारी राखेमा डन्डिफोर हटेर जान्छ।
अनुहारमा चाउरीपन आउन नदिन
– महमा रहेको प्राकृति अक्सिडन्ट विरोधी तत्वले अनुहारमा चाउरी तथा रेखा आउन दिँदैन। घरमै महको मास्क बनाएर अनुहारमा कम्तीमा आधादेखि एक घण्टा राख्ने। यसले छालालाई लचकदार बनाउँछ र चाउरीपन आउन दिँदैन। अनुहारमा चमक पनि आउँछ।नागरिकबाट
जेठ १८ गते, २०७६ - १३:०८ मा प्रकाशित
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र भारतबीचका थाती रहेका द्विपक्षीय विषय कूटनीतिक...
जाडो याममा मह खादा हुन्छन् यस्ताे फाइदा !
मेथी खानुका फाइदा के–के हुन् ?
किशोरावस्थामै सुन्निन्छ पाठेघर, समस्या कसरी पत्ता लगाउने ?
दयालु मानिसलाई रोग कम लाग्ने, आयु लामो हुने
जाडो मौसममा उच्च हार्ट अट्याक : यी हुन् बच्ने उपाए
तुलसीले चिसाेबाट हुने समस्यालाई पनि कम गर्छ, जान्नुहाेस् तुलसीबाट हुने ९ फाइदा
शरीरसम्बन्धी १५ रोचक तथ्य, जान्नुहाेस् के खाँदा र के गर्दा के हुन्छ ?
मधुमेहका राेगीले कस्ताे खाने कुरा खाने ? जान्नुहाेस्, के खाँदा रगतमा चिनीकाे मात्रा सन्तुलनमा रहन्छ
यसकारण साधन प्रयोग गर्नेभन्दा गर्भपतन गराउँनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो
माेबाइल चलाउने बच्चामा देखियाे यस्ताे समस्या, जान्नुहाेस् माेबाइल चलाउनु कति खतरा ?